"Aza manahy ny amin’ny ampitso ianareo; fa ny ampitso hanahy ny azy. Ampy ho an’ny andro ny ratsy miseho ao aminy." Matio 6:34
"Aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao ; mampahery anao Aho sady mamonjy anao." Isaia 41:10
"Hanome saina anao sy hampianatra anao … Aho." Salamo 32:8
Enin-taona i Kanto, ary mianatra mamaky teny. Roa ambin’ny folo taona kosa i Mandresy zokiny, ary efa any amin’ny ambaratonga faharoa. Io hariva io, nijery ny entimody nataon-jokiny ilay zazavavy kely. Hitany fa tsy misy na inona na inona azony. Lasa nankany amin-dreniny izy, niteny tamim-peo kendakenda sy feno fanahiana hoe: «Neny a, rehefa any amin’ny ambaratonga faharoa aho, dia tsy hahavita mihitsy ny ataon’i Mandresy, fa sarotra loatra!».
Hitan-dreniny fa nikorontan-tsaina ilay zazavavy kely, ka nampahereziny hoe:
«Kanto a, vao enin-taona anie ianao e, Mandresy efa roa ambin’ny folo. Rariny, amin’izao taonanao izao, raha hitanao hoe tena sarotra loatra ny ataony. Fa tsy misy miteny aminao anie izao hoe ataovy ny entimodin’ny zokinao e! Zavatra sahaza ny taonanao no asain’ny mpampianatra anao atao, fantany izay vitanao. Miezaha tsotra fotsiny mianatra isanandro isanandro izay asainy ataonao. Ary ho hitanao fa rehefa tonga ny fotoana, dia ho vitanao izay ataon’i Mandresy.»
Eo amin’ny fiainana kristiana, dia misy ihany koa taona samihafa, amin’ny ara-panahy. Ny mpianakavin’ny finoana dia misy ankizy madinika, zatovo ary ray (1 Jaona 2:12-14). Araka izany, ny mpino sasany dia efa mandroso kokoa noho ny hafa. Nefa aoka tsy hifampitaha, ka hitebiteby hanontany tena raha ho afaka hanao tahaka an-dRakoto na Rabe. Aoka hitoky amin’Andriamanitra; fantany mihoatra noho isika ny fahaizantsika, ary ampifanarahiny tsara amin’izany izay angatahiny.
Androany, dia aoka isika hiezaka hianatra ireo lesona nomena androany. Manomana antsika ireo ho amin’izay tian’Andriamanitra hampianarina antsika rahampitso. Dia ho voninahitra ho Azy ny fandrosoantsika ara-panahy.